Korodhka Dhaqdhaqaaqa Isbarbar socda: Gargaarka Labada Dhinac iyo Xuduudaha - Gargaarka Musiibada ee Mataanaha
Koror Dhaqdhaqaaq Isbarbar socda: Gargaarka Dhinacyada iyo Xuduudaha
Home/updates/Koror Dhaqdhaqaaq Isbarbar socda: Gargaarka Dhinacyada iyo Xuduudaha
Xilliga kuleylka kulul ee ka imanaya bacaadka dhagxaanta leh ee Mashiinka Sonoran, waxaa ku jira biyo cabitaan ah oo ku daadanaya dhulka qallalan, oo aan soo sheegin meydadka harraad iyo kuleylka naxariis darada ah. Gacmaha, oo ay ku xad gudbeen forensics-ka nidaam sharciyeed guuritaan-cadaawad ah, ayaa ka tagay gaangiyada si loo sii wado nolosha. Gacmaha, oo ay xoogaysteen magacyo ay ku dhawaaqayaan Kastamyada iyo Ilaalada Xudduudka, ayaa laaday oo qashinka tuuray iyagoo muujinaya naxariis la’aan iyo dareen la’aan ah silica silica.
Astaamaha qalcadda Ameerika waxay isu beddelayaan si muuqata.
Darbiyada. Dib u dhig iyo socodsiinta howlaha magangalyada adag. Tijaabada DNA. Lacagta iyo Dayrarka Khadadka ganaaxyada ee si qoto dheer u milmay guud ahaan miyirka Mareykanka ayaa qoday us iyo iyaga. Codadka hadalka ayaa laga soo mariyaa marxaladaha ololaha, sida riwaayadaha dhagaxa ah, kicinta qaylada indhaha, wax kasta oo lagu caddeeyo iyaga ka hor ethos. Ameerika ee 2019 waxay wadaagaan waxyaabo badan oo caan ah oo ku saabsan roobabyada golayaasha quusitaanka oo kaliya ka sarreeya masiibooyinka dhaqan-siyaasadeed ee bulsheed ee taariikhda oo dhan.
Laakiin, sida sheekada qaawan ee qaawan ee caalimku rumeysan yahay in qaawanaantiisa ay tahay mid aan qarsoodi lahayn oo ku jirta dharka dharka lagu dhejiyay, sidoo kale gardarada qaawan ee nativist, populist, creep creep ayaa si muuqata u muuqata. Iyo dhaqanka caadiga ah ee ka-hortagga soogalootiga, soo-nooleynta waddanku wuxuu yimaaddaa jaranjarooyinka xoogga, jihooyinka derbiga, nidaamka xuduudaha.
[Artwork by Mazatl]
Waqtigan xaadirka ah ee adag, dhismaha ilaa tobanaan sano, jikooyinka bulshada ee ku yaal xadka ma ahan kaliya inay bixiyaan cunno, waxay hurinayaan dhaqdhaqaaqa socdaalka oo dalbanaya caddaalad iyo nolol. Abaabulka wacyigelinta daaweynta kaliya kama bogsiineyso goynta, waxay bixisaa cabitaanno, nabarro nabarro - waxay xoojiyaa hilibka iyo lafaha caabbinta baahsan ee dambiga dhaqdhaqaaqa laftiisa. Meelaha hoygu ma ahan oo keliya inay dadka ka hoos dhigaan saqafyada la aasaasay, waxay muujinayaan ruuxa qoduuska ah oo la qaadi karo lagana beddeli karo ku dhawaad ​​beel kastoo dab ku dhex jira.
Tilmaamaha iska caabbinta wadnaha, si tartiib tartiib ah ugu soo kordha hooska, ayaa kusii socda qaabkiisa, koritaanka iyo ubaxa.
Dhaqdhaqaaqa walaalaha ah ee gargaarka labada dhinac iyo tallaabada tooska ah ee gargaarka bini'aadanimo ayaa sii kordhaya.
Waxay ahayd 6pm markii xayiraaddu soo rogtay gelitaanka gelitaanka ee loogu talagalay basaska isbeddelka imanaya ee shaqaalaha xarunta xabsiga. Tornillo Shaqada Waxay u haysay meel banaan sidii xero iska caabin ah mana baabi'in jiritaankooda jir ahaaneed ilaa xarunta hortooda laga baabi'iyay; teendhooyinka guryaha teendhooyinka ayaa lagu ciqaabay guuritaanka cimilada darajada 20.
Waxay shidaalineysaa dhaqdhaqaaqa haajiraada ee Tijuana, oo ah maamuha soogalootiga iskiis u maamula El Comedor Contra Viento y Marea Waxay siisaa cunno kulul, bannaanka jardiinada, dharka, musqulaha, iyo alaabada kale ee looga baahan yahay kumanaanka iyagoo ka dhigaya dhinaca waqooyi. Contra Viento y Marea, waxaa loola jeedaa "Ka hortagga dabaysha iyo dabaysha" oo la mid ah weedha Ingiriisiga ah ee ka soo horjeedda dhammaan qodobbada. Waa dhaqdhaqaaq iskiis u madaxbannaan oo ka dhex jira dhaqdhaqaaqa weyn ee safarka weyn.
[Farshaxanada waxaa sameeyay @ashlukadraws]
Xaqiiji Caracol, oo ah xarun loogu tala galay caawinta wadajirka ah ee Tijuana waa dhaqdhaqaaq dadku ku xoojinayaan dokumentiga tahriibka, xubnaha bulshada maxalliga ah iyo wadajirka soo socda ee ka jawaabaya baahiyaha degdegga ah ee dadka magangalyo-doonka ah. Meeshan baaqa ah, Cunnada Tijuana Ma aha Bambaanooyin Waxay siisaa cunno, waxaa jira aqoon isweydaarsiyo xirfadeed iyo munaasabado kale, iyo maktabad. Tabaruc ayaa abuuray Rug caafimaad oo bilaash ah, oo ay ku jiraan dawooyinka dabiiciga ah ayaa sidoo kale la bilaabay oo hoosta ka xariiqay Isbahaysiga Caafimaadka Qaxootiga. Xaruntani waxay ubaahantahay adeeg bixiyayaal iskaa wax u qabso ah, mutadawiciin caafimaad oo shati leh, iyo gacmo dheeri ah si loo abuuro daawooyinka dhirta, qalabka waxbarashada, iyo in lagu daboolo dhul badan oo hoyga ah. Foom tabaruc ayaa la heli karaa halkan.
Dhinaca sharciga ah, ogow xuquuqdaada tababbarka Al Otro LadoMashruuca Xuquuqda Xuduudaha ayaa laga sii waday Tijuana. Al Otro Lado waa wadatashi sharciyeed safka hore ee halganka sharciga ah ee matalaya maxbuusyada bilaa sharciga ah ee Koonfurta California. Iyagu sidoo kale, waxay isticmaali karaan tabaruceyaal badan.
Casa De Luz waa dadaal kale oo caawinaad wadaaga ah oo ku saabsan xuduuda. Tani waa koox LGBTQ + koox loo sameeyay inay is difaacaan oo ay is taageeraan, oo sidoo kale kaxaystay qoysaska leh carruur leh baahiyo gaar ah oo u safraya wehel la’aan. Kooxda ayaa mudnaanta siineysa xubnaheeda badbaado iyo ammaan. Iyaga oo horey uga soo baxsaday cadaawad khaniisiinta ee dalalkoodii, ayaa loo gaystey gacan ka hadal intii ay ku sii jeedeen xadka. Casa De luz waa guri ku yaal xaafad aamin ah oo ku taal Tijuana kana fog khatarta iyo cadaawadda, oo siisa nabadgelyo iyo taageero. Casa De Luz wuxuu u baahan yahay kafaala-qaadeyaal Mareykan ah oo magangelyo-dooneyaasha dammaanad ku siiya. Waxay raadinayaan shabakado dhinaca Mareykanka ah si ay ugala shaqeeyaan sidii ay u heli lahaayeen dad waayeyaal kafaala-qaadeyaal ah oo iyaga ka taageera dacwadaha maxkamadda iyo heerka bilowga hagaajinta ee ku nool Mareykanka.
Sidoo kale waa la isku waafaqay, oo si dhow ula shaqeeya Casa De Luz iyo Contra Viento y Merea waa QTPOC, dhedig, iyo hogaaminta dhalinyarada, farshaxanka ku saleysan caawimaada wadajirka iyo wadajirka warbaahinta, Bulshada Hecate. Hecate Society waxay taageertaa LGBTQ + iyo dadka nugul ee ku dhex jira bulshada qaxootiga inta lagu jiro kala-guurka, pre, inta lagu jiro iyo dib-u-dhigida howlaha haynta iyo waxay bixisaa taageero ku saabsan guriyeynta, cuntada, gargaarka sharciga, marka lagu daro adeegsiga farshaxanka iyo warbaahinta si loo dhiso awood wadareed iyo bogsiinta.
Gudaha New Mexico, the Isbahaysiga Xoreynta Trans Transition waxay taageerto trans magangalyo-doonka markii uguhoreysay markii laga sii daayo xabsigooda, in kastoo ay sidoo kale wacyi geliyaan xarunta lagu hayo ee Cibola, oo ah xarunta kaliya ee lagu hayo ee Mareykanka ee hada kujira "qulqulka trans" ee wadanka oo dhan. Mashruucan wuxuu siinayaa guriyeyn ku meel gaar ah, dhar, cunno, taleefanno gacmeed, gaadiid, saaxiibtinimo, iyo taageero garoonka diyaaradaha / baska ah si ay u helaan asaasiyaasha muddada dheer.
Altruist Relief waa tusaale keliya oo ka mid ah dad badan oo ku hawlanaa samata bixinta musiibada oo u rogaya isla xirfadahaas iyo waaya aragnimadii midnimada muhaajiriinta. Shabakada Gargaarka Labada Dhinac isla wixii la mid ah ayay sameeyeen, iyagoo ka sii socday gargaarka daad-gureeynta ee Pine Ridge una gudubtey kaalmo-wadaagga xadka muddo toddobaadyo ah.
Labada halgan waa isku xirnaansho. Waan ognahay in haajiriddu, ay jiri doonto, shey muhiim u ah ka badbaada qalalaasaha cimilada. Furitaanka xuduudaha waxay caddeyn u noqon doontaa xeelad taariikhi u ah jiritaankeenna wadajirka ah.
Badanaa, magangalyo-doonyaasha laga sii daayay xariga dhinaca Mareykanka waxaa lagu saaraa basaska greyhound. Angry Tias iyo Abuelas waa, mar kale, waa hal tusaale oo ka mid ah kuwa badan, ee dadka ku nool magaalooyinka dalka oo dhan kuwaas oo kula kulmaya magangalyo-doonka saldhigyada basaska, biyo, cunno, iyo waxyaabo kale - kumanaan qof oo kooban oo rajo iyo xiriir la leh, markay sii dhex marayaan. Magaalooyinkan waxay u siiyeen qoysaskoodii kafiil.
Mid ka mid ah shabakado badan oo isku xiraya wajiyadan kala duwan ayaa ah Jooji Shabakadda derbiga, kuwaas oo gacan ka geysanayay abaabuliddan badan.
Mas Muertes Ma Jirto - Dhimasho Ma Sii Sii Waxay siisaa gargaar deg deg ah dadka dhibaataysan ee ku sugan saxaraha koonfur-galbeed Arizona iyo masaafurinta iyo muhaajiriinta waqooyiga ku sugan Mexico. Ma Jirto Dhimasho Dheeraad ah oo haysata joogitaan bini'aadminimo sanadka oo dhan, oo diiwaangeliya xad-gudubyada oo ka tagaya biyo iyo badbaadin nolosha iyo rakaabka soogalootiga.
[Sawirka farshaxanka ee Fernando Marti]
Ku qulqulaya geerida lamadegaanka ayaa ah masiirka boqollaal qof oo hadhaagii ay ka qariqday ciidda sunta laga daadiyay. Qofka aadamiga ah ee u hayaamaya guud ahaan muuqaalka dhulkani wuxuu ubaahan yahay ugu yaraan hal galaan biyo maalintii, qiyaasta hoose, si uu u noolaado. Kastamyada iyo Wakiilada Ilaalada Xudduudku waxay leeyihiin si kas ah loo burburiyey ku dhawaad ​​afar kun oo galaan oo biyo ah oo ay ka hadhsan yihiin Dhimashada No More More. Taasi waa biyo ku filan in lagu noolaado nolosha kumanaan muhaajiriin ah oo noloshoodu dhammaatay iyaga oo galay "dambiga" ee ka baxsiga dhimashada iyo rabshadaha si ay noloshooda u sii wataan.
Majirto kastamka iyo wakiilka xuduudaha xuduuda masuulka ka ah baabi'inta harooyinka biyaha u dagaalamaya xorriyadooda nidaamka cadaalada. Dr. Scott Warren, oo isagu ka qaybqaatay ka tagista qaribaatooyinka sababay iyo gargaarka kale ee bini'aadannimo, is.
Guud ahaan gumeystaha 'Mareykanka', dhaqdhaqaaqa dhisaya gargaarka iyo wadajirka si loogu adkeysto soogalootiga iyo bulshooyinka aan sharciyeysneyn ayaa hoos u dhigay weerarada ICE waxayna difaaceen jidadkooda codkooda iyo jirkooda.
Shabakadaha derisyadu waxay ka hortageen oo difaaceen tareenka dhulka hoostiisa ah ee barakeysan iyo meelaha aaminka ah ee halkaas oo ay saxafiyiintu ku adkeysteen qulqulka sheekada ee ah in nolosha mudnaan la siinayo oo la ilaaliyo iyada oo lagu saleynayo dhalashada, dhimashadaas ayaa booqan karta kuwa aan xasilooneyn kuwa qaada culeyska khasabka ah. dhaqdhaqaaq iyo barakac ballaaran, in xudduudyaduhu ka xoog badan yihiin maqaarka, in deyrarku ay ka nugul yihiin lafaha, in darbiyada ay ka xoog badan yihiin dhiigga.
Qayb kasta oo kaalmo ah, min caafimaad ilaa sharci, cunno iyo biyo ilaa hoy, min difaac dhan ilaa iska caabin hor leh- dhamaantood waxay kuxiranyihiin wadajirka, gargaarka tooska ah iyo ficil toos ah. Dhulka waxaa lagu abuuray dhaqdhaqaaqyada safka hore si cadaalada loo dhaqaaqo. Iyada oo dhaqdhaqaaq ay sidoo kale ka go'antahay in ay toos wax ugu qabtaan gargaarka bini'aadannimo, waxaan u aragnaa midnimada magangalyo-doonka iyo kaalmaynta labada dhinac sidii dhaqdhaqaaq walaasheed ah oo annaga noo gaar ah Waan ognahay in shaqadani ay tahay shaqo muhiim ah, waa shaqo kacaan, waana shaqo muqadas ah.
Dadka u hayaamaya qaaradaha iyo qaaradaha oo dhami way kujiraan gaar ah xornimada. Kala soocidda kala-qaybsanaanta nativistka ee dadka soo barakacay ee xuduudaha vis-a-vis waxay la macno tahay muujinta iyo bara-kicinta in xudduudduhu keenayaan oo ay xoojinayaan tahriibinta aadanaha, tahriibinta galmada iyo isgoysyada dhimashada ee sababay in kumanaan qof ay ku dhintaan badda Mediterranean, kumanaan ayaa ka soo dhowaaday ku dhowaad baraf-dil ilaa ay socdaan. Alps-ka Faransiiska, kumanaan caruur ah oo la la’yahay, isdilid aan tiro lahayn iyo xabsi weyn oo ah badbaadayaasha kufsi, jirdil, dagaal, masiibo siyaasadeed, gaajo, cudur iyo musiibo cimilo.
Waxay leeyihiin xuduudaha laakiin waxaan haysannaa tirada.
Dadku waxay kuxireen canab abuurka dillaacyada gidaar kasta iyo godad ku yaal xayndaab kasta si ay ugu koraan dhaqdhaqaaq dhaqdhaqaaq oo ku saleysan caawimaadda labada dhinac, garashada, dabaaldegga, iyo is-daryeelidda midba midka kale.
Waan ku aragnaa.
In kasta oo laga yaabo inaan ku jirno juquraafiyo kala geddisan ama waqtiyo ama kalandarro, waxaan u dhaqaaqnaa meel la mid ah. Haddii aan ku hawlannahay caawinaad isweydaarsiga ka-badbaadayaasha musiibada, magangalyo-doonka, ama qaxooti-ka-maal-gelinta ee reerahaada, waan ku aragnaa. Waxaad ku socotaa jidka cidlada dhexdeeda, oo aan hore u jirin. Annaguna waa sharaf iyo sharaf toona inaan kula garab joogno.
2019-09-14T20:41:23-04:00Waxaa laga yaabaa 16th, 2019|updates|